Ntinye aka na ntanetị: Egg Marketing Blog | Martech Zone
Ntinye aka na ntanetị: Egg Marketing Blog
Ihe na - esote ime bred nke iri na abụọ bụ, n'ụzọ dị ịtụnanya, Akwa Ahịa Blog!
Banyere ire Ahịa: Susan Payton bụ Onye Mmekọ nke Njikwa Egg. O nwere MBA na Mahadum nke Central Arkansas, ma nwee ogo BA na Bekee na French. Susan arụọla ọrụ dịka onye edemede n’ime ikike okike afọ iri. Ugbu a, ọ na - eji ikike ihe ọmụma ya na ahụmịhe ya na azụmaahịa ya, azụmaahịa ya na azụmaahịa ya eme ihe.
Enwere m mmasị na akwụkwọ akụkọ 'dị ọcha' dị na blog gị! Nhazi ahụ dị oke ọcha ma dịkwa mma - emechara nke ọma! Echere m na enwere ohere na ogwe aka gị iji tinye aha RSS ma ọ bụ njikọ Email. Ikekwe na-ekpebi Homelọ gị na Banyere njikọ… wee mee ka ị ghọta ụdị ndebanye aha na akara ngosi RSS. Ọ bụrụ na ọ bụghị na mmanya mmanya, karịa n'akụkụ aka nri ya n'akụkụ aka nri.
Ana m akwado akara ngosi RSS
n'ihi na ọtụtụ saịtị dị na elu na n'akụkụ aka nri nke ibe 'n'elu ogige atụrụ'… nke ahụ abụghị ihe achọrọ maka ịpịgharị. Agbanyeghị na ọtụtụ ihe nchọgharị ugbu a gụnyere ike RSS - akara ngosi RSS bụ ụzọ aghụghọ iji mee ihe maka ndị mmadụ ịdenye aha!
Sans serif ederede adịghị eme enyi dị ka mkpụrụedemede serif maka ịgụ - mana ị naghị ahụkarị mkpụrụ edemede serif mgbe niile maka ịgụ isiokwu dị na weebụ. Amaghị m ihe kpatara ya mana anaghị m eji ha. Iji kwụọ ụgwọ, agbanyeghị, m na-eme hụ na enwere ike ịgụ ụdị edemede m dị ukwuu. Ruo oge ụfọdụ, anyị hụrụ nha ihu ederede na-agbadata na webụ ka ndị nlele na-ebuwanye ibu.
Ugbu a, ndị nlekota di nnukwu na mkpebi dị oke - na-eme ka mkpụrụedemede pere mpe ma sie ike ọgụgụ! Anyị abatala gburugburu. Aga m akwado ịbawanye ogo nke ọdịnaya gị ole na ole. I nwere ike ime nke a naanị maka etiti etiti gị site na ịtinye font-size: 13px ka #contentmiddle na mpempe akwụkwọ gị.
Ka m na-eme ndụmọdụ ndị a, ana m ahụ mgbe ọ bụla m na-emebi iwu nke m! Agbanyeghị, aga m akwado ịtinyekwu isi okwu (h2 na / ma ọ bụ h3) n'ime ọdịnaya gị yana ụfọdụ ndepụta ndị edeturu. N'ikwu eziokwu, ndị mmadụ anaghị 'agụ' blọọgụ na weebụsaịtị ka ha na-eme. Ọ chọrọ ka anyị mee mmaa ọdịnaya anyị. Chee echiche banyere blọọgụ ọ bụla dịka ọkpụkpụ. Tinye isi maka isi, ahụ, ụkwụ na ụkwụ. Ekem tinye ụfọdụ mgbo aka maka ọgịrịga gị. Ka ị na-enyocha ọrụ gị, gbaa mbọ hụ mgbe ị gbara akwụkwọ, ị nwere ike ịghọta ihe akwụkwọ ozi niile na-anwa ikwu n'ebughị ịgụ okwu ọ bụla.
Tinyere isiokwu na mgbọ - jide n'aka na ị na-eji ihe oyiyi dị iche na posts gị. Nke a dị mkpa karịsịa mgbe ndị na - agụ akwụkwọ gị na - agụ akwụkwọ gị site na onye na - agụ ndepụta nri ebe aesthetics blog gị dị
ẹdụk. A foto ruru otu puku ndị na-agụ! Ekwere m gị nkwa. You'll ga - ahụ ole na ole n’ime posts m na - enweghị onyonyo ma achọpụtara m ngwa ngwa na - agbanwe agbanwe na ntinye site na ndepụta m site na ndepụta m.
You cherela maka ịdebanye saịtị gị na blọọgụ gị ma ọ bụ nke ọzọ? Echeghị m na ọ ga-ewe ihe dị ukwuu iji bugharịa akara ngosi gị na blọọgụ gị ma ọ bụ ọbụlagodi iji blọọgụ gị dị ka etiti etiti weebụsaịtị gị. Omume ụbọchị ndị a na - agbakọ blọọgụ abụọ are yiri saịtị ọzọ na saịtị na - eji usoro ịde blọgụ karịa. Enwere m ebe nrụọrụ weebụ maka obere oge, akpọrọ Koodu4Hire. Achọtara m mgbe m gachara ole na ole na m na-azụ ahịa m ngwa ngwa na blọọgụ m karịa na saịtị m! Nwere ike ịchọta otu ihe ahụ.
Ma ọ dịkarịa ala, jide n'aka na ị ga-etinye njikọ na akwụkwọ gị na sidebar gị! Akwụkwọ gị, 101 Ndị ọchụnta ego Atụmatụ, ga-ewetara olu blọọgụ gị ntụkwasị obi ka ị na-aga n'ihu iwulite ikike! Nakwa, ọ ga - eme ka ahịa gị kwalite ka blọgụ gị na - eto eto.
Ọ ga-ewere ụfọdụ oghere ọcha na kọlụm ahụ. Anaghị m atụ gị ụfụ na ya - echere m na ị ga-arụ ọrụ n’isiokwu ahụ!
Achọpụtara m oyiri meta mkpado na gị nkụnye ndị eji isi mee - ma na Keywords bụ oghere. Aga m akwado ụfọdụ meta mkpado plugins na m dere banyere na post gara aga.
Nke ahụ kwesịrị ị na-arụsi ọrụ ike nwa oge! Mee ka m mara ka blog gị si eme mgbe itinye ụfọdụ mgbanwe ndị a n'ọrụ. Nwee ndidi! Successga nke ọma na ịde blọgụ gbasara ihe niile Ọdịnaya, Mmasị na Oge!. Biko abiakwala onye obia - anyi ga acho inu na azu ka o si aga!
Ọ bụrụ na Blog gị ga-amasị gị Enyere, soro ntuziaka na m Blog Tipping Post.
Tags: ndụmọdụ blogakwa ahia blọgụ
Rụ Ọrụ Ọtụtụ Eleghị Anya atlọ? Easyzọ Dị Mfe Isi Kwụsị…